May 5, 2020 - Alinnpya
Mask ထဲကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးထည့်သယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on Mask ထဲကနေ မူးယစ်ဆေးဝါးထည့်သယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်
နှာခေါင်းစည်း (Mask)အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးများ သိုဝှက်သယ်လာသူကို ကသာခရိုင်၊ အင်းတော်မြို့နယ် ကိုဗစ် ရောဂါ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုဂိတ်တွင်မေလ ၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီခွဲခန့်က ဖမ်းမိခဲ့သည်။ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားသွားလမ်း အင်းတော်မြို့နယ်၊ နတ်မဟုတ်ကျေးရွာအနီး ၅ ဖာလုံခန့် ရှိ ကိုဗစ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သယ်ဆောင်လာသူမှာ နတ်မဟုတ်ရွာနေ အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားဖြစ်ပြီး နှာခါင်းစည်းအတွင်း 3CC ဆေးထိုးပိုက် နှစ်ခုအတွင်း မူးယစ်ဆေးများထည့်သယ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ […]
အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ
စူဠသုဘဒ္ဒါ မုန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ပြောရက်ကြတယ်…အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား….ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ… အင်ကြင်းပန်းမှာ ခါချဉ်လေးကပ်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် သုဘဒ္ဒါမုန်းရက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး… ပြိုင်ဘက်နဲ့ ယှဉ်ရင် အချစ်တွေအကုန်အစင် မရခဲ့လို့သုဘဒ္ဒါရင်မှာ နာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါတွေကို ရှင်နားလည်ရဲ့လား မင်းဆဒ္ဒန်…. ဟိမဝန္တာ တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ်မှာကျမဟာ ရှင့်အတွက်ဆို အသက်ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပါရက်နဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ် ချစ်ခဲ့တာတောင် ရှင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟင့်အင်း… ပထမချစ်ခြင်း မဟုတ်ရင် ဒုတိယအဖြည့်ခံတော့ ဘယ်မိန်းမသားကမှ မဖြစ်ချင်ဘူး…. မဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းဆဒ္ဒန်… […]
လယ်သမားကြီးရဲ့ ကြွက်ထောင်ချောက်ကြောင့် လယ်သမားကြီး မိန်းမနဲ့ မွေးထားတဲ့ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားတွေ သေတဲ့အဖြစ်
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on လယ်သမားကြီးရဲ့ ကြွက်ထောင်ချောက်ကြောင့် လယ်သမားကြီး မိန်းမနဲ့ မွေးထားတဲ့ ကြက်၊ ဝက်၊ နွားတွေ သေတဲ့အဖြစ်
ကြွက်ထောင်ချောက် (ဖေမြင့်) တစ်ခါတုန်းက …ကြွက်တစ်ကောင်က လယ်သမားအိမ်ထဲ အိမ်နံရံပျဉ်နှစ်ချပ် စပ်ကြားက ဟ,နေတဲ့နေရာ အကြားကနေ ချောင်းကြည့်တော့ လယ်သမားနဲ့ သူ့မယား အထုပ်တစ်ထုပ် ဖြေနေတာတွေ့ရတယ်။ အထဲမှာ စားစရာများ ပါလေမလား၊ ပါရင် ငါများ တနည်းနည်းနဲ့ စားရလေမလား၊ မျှော်လင့်တဲ့ စိတ်နဲ့ စောင့်ကြည့်တော့၊ လားလား … စားစရာ မုန့်မဟုတ်၊ နာစရာ တုတ် ဖြစ်နေတယ်။ အဲ … စကားအဖြစ် ပြောတာ၊ […]
ရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပေမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံစကားပြောနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on ရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပေမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံစကားပြောနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
မိခင်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အပူမီးတွေ တောက်လောက်နေပမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးနေသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက် ဧည့်ခံနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ပုံရိပ်က အရမ်းကို သနားစရာကောင်းလှပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတစ်ယောက် မျက်ရည်မဆည်နိုငအောင်ဖြစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကတော့ နာမည်ကြီးမြိတ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးက စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်း ဖြစ်နေကြရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကြီးလည်း အခုချိန်ဆို ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းစွာ အနားယူနေပြီလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။ Source: N-H-K […]
လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ(ရုပ်သံ)
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ(ရုပ်သံ)
လနဲ့ချီပြီး သွေးနဲ့ ချွေးနဲ့ ရင်းထားရတဲ့ တောင်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မြစ်ထဲမှာ မျောပါသွားပြီ(ရုပ်သံ) ပြောင်းဖူးအထွက်မကောင်းမှာဆိုးလို့ ခလေးပြုစုသလိုပြုစုရ မြေသြဇာထည့်ရ ဆေးဖြန်းပေးရနဲ့ ရောင်းရတဲ့အချိန်ကျ စျေးကောင်းပြီး တရုတ်ပြည်ဝင်လို့မရ တစ်ခြားနည်းလမ်းနဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရပေမယ့် မင်းတို့က အသေပိတ်တယ် အသားကုန်လိုက်ဖမ်းတယ် လယ်သမားတွေရှဲူ မျက်ရည်တွေ နမ့်မောဝ်ထဲ စီးကျကုန်တယ် တစ်ချိန်ကျ မင်းတို့နိူင်ငံ ကျိန်စာသင့်ပါစေ ဘေးကပ်ဆိုးကျိုးကျပါစေ မူဆယ်မြို့နယ်မှာ ဒီလိုပြောင်းဖူးစိုက်တဲ့ တောင်ယာ ဧကပေါင်း သောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…ခုပြထားတဲ့ရုပ်သံတွေဟာ မူဆယ်မြို့နယ်ထဲက ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူတွေရဲ့ […]
“ကလေးကိုပါ မွေးစားပြီး တာဝန်ယူပေးလိုက်တဲ့ထိသားအမိ(၂)ဦး ကို ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပါပြီး”
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on “ကလေးကိုပါ မွေးစားပြီး တာဝန်ယူပေးလိုက်တဲ့ထိသားအမိ(၂)ဦး ကို ကူညီပေးခဲ့လိုက်ပါပြီး”
(2.5.2020)ရက်နေ့ ညနက်ပိုင်း မော်လမြိုင်မြို့ကမ်းနားလမ်းနဲ့ ထားဝယ်တံတားလမ်းထောင့် ပလက်ဖောင်းမှာ ကောင်မလေးတယောက် နဲ့ အသက်(၁)နှစ်ကျော်လောက်သာ ရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်တဦးတို့လမ်းဘေး ပလက်ဖောင်းမှာ အိပ်နေလို့ပါတဲ့ … မိခင်ရော ကလေးပါ အရမ်းကို ငယ်လွန်းနေပြီးပလက်ဖောင်းမှာ အိပ်၍ မသင့်တော်ကြောင်း မေးမြန်းကြည့်တော့လဲ ယောကျင်္ားဖြစ်သူကားမှောက်ပြီးဆုံးသွားလို့ အားကိုးရာ မရှိတော့လို့ စိတ်ညစ်ပြီး ကလေးတဖက်နဲ့ ရောက်ချင်ရာ ရောက်ဆိုပြီး ရထားစီးခဲ့ရာမှ မော်လမြိုင်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီးပလက်ဖောင်းပေါ် အိပ်နေသည်ဟုပြော၍ အဆင်ပြေသလိုကူညီပေးပါဦးဆိုပြီး ဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်းလာလို့မော်လမြိုင် RESCUE […]
စစ်ကိုင်းတွင် အသက် ၆၀ ကျော် စိတ်ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီး ၁ ဦး အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on စစ်ကိုင်းတွင် အသက် ၆၀ ကျော် စိတ်ဝေဒနာရှင်အမျိုးသမီး ၁ ဦး အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံရ
မြို့ရွာတို့ ၌ ကပ်၊ ဥပဒ် ဆိုက်ေရာက် လိမ့်မည်ကို ကြိုတင်၍သိနိုင်သော အတိတ်နိမိတ်ထူးများ
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on မြို့ရွာတို့ ၌ ကပ်၊ ဥပဒ် ဆိုက်ေရာက် လိမ့်မည်ကို ကြိုတင်၍သိနိုင်သော အတိတ်နိမိတ်ထူးများ
ယခု ခေ တ် ဆေးသိပ္ပံ ပညာအရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုးလို့ ဘယ်လိုပင် သတ်မှတ် ကြပေမယ်လို့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ တရားတော်အရ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၊ ရောဂါပိုး ဆိုတဲ့ အရာတွေဟာ ရုပ်သာ ရှိ၍ နာမ် မရှိ။ စိတ် မရှိတဲ့အရာ ဝတ္ထုတွေသာ ဖြစ်တယ်။ ” ပါဏ ” လို့ခေါ်တဲ့ အသက် မရှိတဲ့ ထူးခြားသော ရုပ် သက်သက်သာ […]
May 5, 2020 AlinnPya Comments Off on ထောင်ကျနေတဲ့ ချစ်သူ အာသာဖြေကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် အပြာဆန်ဆန် ရုပ်သံတွေ ရိုက်ကူးပေးပို့ခဲ့
ထောင်ကျနေတဲ့ ချစ်သူ အာသာဖြေကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် အပြာဆန်ဆန် ရုပ်သံတွေ ရိုက်ကူးပေးပို့ခဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ထောင်ကျနေတဲ့ ချစ်သူ အာသာဖြေကြည့်နိုင်ဖို့အတွက် အပြာဆန်ဆန် ရုပ်သံတွေ ရိုက်ကူးပေးဖို့ခဲ့တဲ့အတွက် ရဲက ဖမ်းဆီးတာကို ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ သားလေးဖြစ်သူရှေ့မှာတောင် မရှောင် ညစ်ညမ်းပြကွက်တွေကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ အမျိုးသမီးရဲ့အမည်ကတော့ Noelle Leigh Rascatti ဖြစ်ပြီး အသက်(၃၂)နှစ်ပါ။ သူမဟာ သားဖြစ်သူရဲ့ရှေ့မှာပဲ မဖွယ်မရာ အာသာဖြေတဲ့ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ […]